Soomaaliya oo guul kasoo hooysey Olombikada Naafada ee ka soconaya Rio de Janeiro + Sawirro. – Cayaaraha dunida
Soomaaliya oo guul kasoo hooysey Olombikada Naafada ee ka soconaya Rio de Janeiro + Sawirro.
Waxaa maanta dhacay tartankii uu Farxaan Caddaawe ka qayb gelayay isagoo Somalia metelaya, waxaana guud ahaan tartankaan oo ahaa orodka 100m kasoo qayb galay 14 laacib oo kala matalayay 11 wadan (seddax ciyaaryahan baa isku wadan ahaa).
Waxaa loo kala qaybiyay laba qaybood oo min toddobo ah. Waxaa la rabay in warreegga labaad ay usoo gudbaan qayb walba sadexda qof ee ugu horreeysa kaddib waxaa soo raaci doona labada qof ee waqtiga ugu fiican ku orday sidaa ayayna 8 qof (wadamo ugu soo gudbayeen tartanka kama danbaysta ah.
Farxaan oo ka tirsanaa qaybta 1-aad waxa uu ka galay kaalinta 5-aad waxaa uuna ku orday 18.49 ilbiriqsi (100m). Marka guud ahaan loo fiiriyana wuxuu 14 qof ama waddan ka galay kaalinta 9-aad.
NATIIJADA OO DHAMAYSTIRANI WAA TAN:
1. USA….IANNOTA Gianfrance ………… 17.20
2. USA….MARTIN Raymond………………..17.27
3. MEXICO…HERNANDEZ Salvador………….17.80
4. AUSTRALIA…MCINTOSH Sam……………………17.92
5. PORTUGAL…TRINDADE Mario…………………..17.94
6. SWITZERLNAD….BOESCH Beat………………………..17.94
7. COLOMBIKA..TORRES Cristian…………………….18.23
8. USA.. ROBERTS Josh……………………..18.41
9. SOMALIA..ADAWE Farhan……………………..18.49
10. THAILAND..KURATTANASIRI Pichaya………19.18
11. JAPAN..UEYONABARU Hirukuzu……….. 19.35
12. AUSTRIA..GEIERSPICHER Thomas…………19.82
13. PHILIPINES..MANGLINAN Jerrold Pette……..20.04
14. LITHUANIA..SKUCAS Kestutis……………………20.03
Farxaan ayaa dhibco aad u yar u jirey kaalinta 1-aad oo lagu galay 17.20, halka uu Farxaan ka keenay 18.49, isagoo 1.29 ilbiriqsi u jirey billadda dahabiga ah. Haatanna waloow aynaan billad helin misna waa guul taariikhi ah oo timid markii ugu horeysay ee aan imaanno masraxa ciyaaraha Naafada ee paralympics-ka.